संविधान दिवस : चार वर्ष बित्दा पनि किन बन्न सकेन सर्वस्वीकार्य संविधान ? | Ratopati
काठमाडौँ– चार वर्षअघि अर्थात आजकै दिन २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिनको खुसियालीमा यो दिवस धुमधामका साथ मनाइँदैछ ।
एकातिर संविधान जारी भएको खुसियालीमा धुमधामका साथ संविधान दिवस मनाइरहने, अर्कोतिर आजकै दिनलाई कालो दिनका रूपमा विरोध गर्ने दुई विपरीत कामहरु भइरहेका छन् । यसले संविधानप्रति विमति, असहमति र असन्तुष्टि छ भन्ने स्पस्ट सङ्केत गरेको छ ।
खासगरी मधेसी, जनजाति र थारु समुदाय भने संविधानले आफूलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै संविधान र संविधान दिवसको विरोध गरिरहेका छन् ।
हुन त २०७२ सालमा संविधान जारी गर्ने समयमै मधेस केन्द्रित दलको असन्तुष्टि नरहेको भने होइन । तर संविधान संशोधन गर्दै जाने र असन्तुष्टिहरु सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने दलहरुबीचको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि संविधानप्रतिको विमति झाँगिदो छ । तर, असन्तुष्ट पक्षहरुले भनेजस्तो संसारका कुनै पनि देशमा बनेका संविधान सर्वस्वीकार्य भएका उदाहरण पनि कमै छन् । यो बीचमा दुई पटक संविधान संशोधन पनि भइसकेको छ तर अझै पनि संविधानप्रतिको असन्तुष्टि मेटिन भने सकेको छैन । बरु इतिहासमै पहिलो पटक संविधानसभाबाट जनताका प्रतिनिधिले बनाएको यो संविधानमाथि चुनौती र विरोधहरु थपिँदै गएका छन् । संसदभित्र र बाहिरबाट संविधानमाथि प्रहार हुने क्रम रोकिएको छैन । यद्यपि सरकार र ठूला दलहरु आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताइरहेका छन् । संविधान दिवसकै दिन काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन गर्न सकिने दोहोर्याएका छन् । आखिर किन भएन त चार वर्ष बित्दा पनि सबैले अपनत्व गर्ने संविधान ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न हामीले काँग्रेस नेता कृष्ण सिटौला, राजपा नेपालका नेता महेन्द्र राय यादव, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य र नेकपाका नेता देव गुरुङसँग सोधेका छौँ ।
अधुरो र अपुरो भएकाले सर्वस्वीकार्य हुन सकेन : महेन्द्र राय यादव, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक
हामी चाहान्थ्यौँ, संविधानसभाबाट संविधान बनोस् । नेपाली जनताको पनि त्यही चाहना थियो । जसमा केही मूलभूत कुराहरु थिए, अन्तरिम संविधानमा लिपिबद्ध भएका मार्गचित्रका आधारमा नयाँ संविधान निर्माण गरिने भनिएको पनि थियो ।
नेपालको इतिहासमा २००७ सालदेखि २०६३ को आन्दोलनसम्म नेपाली जनताले धेरै चरण र कालखण्डमा आन्दोलनहरु गरे । तर कार्यान्वयनपक्ष जनताको आन्दोलनको भावनाअनुसार हुन सकेनन् । संविधान जसलाई सहमतिको दस्तावेज भनिएको छ, त्यसलाई बनाउने दलहरुले नै तोड्ने काम गरिरहेका छन् । सहमति कार्यान्वयन नगर्दाको परिणाम नेपाली जनताको सर्वस्वीकार्य संविधान बनोस् भन्ने चाहना पूरा हुन सकेन । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपतिक र समावेशिताका लागि हामीले पनि आन्दोलन गरेका थियौँ । त्यही बलिदान र आन्दोलनका कारण अहिले पनि हाम्रा धेरै नेता जेलमा छन् । मुद्दा लागिरहेको छ । देशको एउटा ठूलो शक्ति उत्पीडन र विभेदमा बाँचिरहेका छन् । मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, थारुलगायतका सीमान्तकृत समुदायहरुले यो संविधानको अपनत्व लिन सकिरहेका छैनन् । त्यो अपनत्व किन लिन सकेका छैनन् भन्नेमा हामी नै जिम्मेवार छौँ । किनभने हामीले गरेका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गरेका छैनौँ । त्यसकारण संविधान अधुरो, अपुरो छ र सर्वस्वीकार्य छैन ।
जब संविधान कार्यान्वयनको सवालमा यो देशको मूल शक्तिहरुलाई याद गरिँदैन र अलग राख्दै बहुमतका नाममा संविधान कार्यन्वयन गर्न खोजिन्छ भने सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अनुभूत गर्न ती जनताले पाउँदैनन् । सत्ताको बाँडफाँट गरेर घोषणा गरिएको यो संविधान कसरी विश्वको उत्कृष्ठ संविधान भयो ? के सामथ्र्य र पहिचानका अधारमा यो संविधान छ ? छैन । संविधान बनाउने शक्तिहरुबाट नै खासगरी अहिले सत्तामा भएका दलहरुबाट आफै निर्माण र उल्लङ्घन भएको छ । हामीले यो संविधानको स्वामित्व नलिए पनि सहभागी छौँ । सहभागी यो अर्थमा छौँ, यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । २४० वर्षको पुरानो सत्ता परिवर्तन भएको छ, सङ्घीयतालगायतका विषयमा हामीले सोच्यौँ । लोकतन्त्रको सबैले आफ्नै ढङ्गले बुझिरहेका छन् तर हामीले समावेशी लोकतन्त्रको कुरा गरेका थियो । लोकतन्त्रका लागि लड्ने बेलामा मधेसवादी दलहरुको सङ्घीय गठबन्धन थियो । कुनै पनि निकायले जनताको सार्वभौम निकायलाई विघटन गर्न मिल्दैन । यो प्रश्न रहन्छ नेपालमा । दोस्रो संविधानसभामा मधेसवादी दलले चुनावमा धाँधली भयो भन्यो । छानबिन समिति बनाइयो तर त्यो समितिको रिपोर्ट अहिलेसम्म आएको छैन ।
हामीसँग त्यतिबेला चारबुँदे सम्झौता भएको छ । प्रचण्ड त्यसबेला हाम्रो २५ दलको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो । त्यो सम्झौतामा तपाईंहरु आउनुुस्, सहभागी बन्नुुस्, राष्ट्रिय सभामा आफ्नो समानुपातिकको नाम दिनुस् । तर हामीले मानेका थिएनौँ । त्यो सम्झौता पनि जीवितै छ । त्यसमा ८० प्रतिशत पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषयहरुलाई यो संविधानमा राखिनेछ भनेर लेखिएको छ । जुन २० प्रतिशत असहमतिका विषय छन् ती विषयलाई समेटेर सहमतिको संविधान बनाउँछौँ भनेर चारै पक्षबीच लिखित सम्झौता भएको थियो । त्यसरी लिखित सम्झौता गरिए पनि संविधान बनाउने बेला त्यो सम्झौता तोड्ने काम भयो अर्को १६ बुँदे सम्झौता गरेर । मधेसवादी दललाई बाहिर राखेर संविधान बनाउँदा अप्ठ्यारो भयो भनेर उहाँहरुले अहिले किन भन्न सक्नुभएको छैन ? हामीले मात्र होइन यो विषयमा ठूलाठूला दलहरुमा पनि यो कुरा थाहा छ तर बोल्न सकिरहेका छैनन् । संविधान संशोधनका विषयमा कुन पार्टीको दस्तावेजमा लेखिएको छैन ? तत्कालीन माओवादी र एमालेको ७ बुँदे सम्झौतामा पनि संविधान संशोधनको कुरा लेखिएको छ । काँग्रेसको घोषणापत्रमा छ तर किन संशोधन गर्नुभएन ? हामीले उठाएका विषयलाई थाँती राख्दै २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा गर्नुभयो र त्यसयता २ पटक संविधान संशोधन पनि गर्नुभयो । तर ती दुवै संशोधन अधुरा रहे । निर्वाचन प्रणालीका बारेमा संविधानमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको कुरा गरिएको छ । तर त्यसको सुनिश्चितता भएन । कुनै ठाउँमा २२ हजार त कुनै ठाउँमा ७ हजार जनसङ्ख्या भएको नगरपालिका छ । यस्तो अवस्थामा कसरी समानता भयो ?
संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ : देव गुरुङ, प्रमुख सचेतक, नेकपा
बहुवर्गीय, बहुविचार, विविधायुक्त समाजमा एउटै प्रकारको विचार हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन । विचारमा विविधता हुन्छ । त्यही सापेक्षताको बीचमा सहमतिका आधारमा संविधान बन्ने हो । सापेक्षित सहमतिको आधारमा बनेको संविधान पूर्ण रूपले विवादमुक्त हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन । केही विवाद रहिरहन्छन्, एउटा पाटो यो । जतिसुकै विवाद रहे पनि आखिर राज्यले कार्यान्वयको पक्षमा अगुवाको भूमिका खेलेको हुन्छ, अहिले त्यही भइरहेको छ । कार्यान्वय गर्ने तरिकामा संविधानले परिलक्षित ऐन, नियमहरु, विधिविधानहरु छिटोभन्दा छिटो बनाउने हो । त्यसले परिकल्पना गरेका संरचनाहरु छिटोभन्दा छिटो बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयको तहमा लैजाने हो । सरकारको तर्फबाट यसमा सक्दो प्रयास भइरहेको छ । त्यसको पूर्णता र आंशिक भन्ने हुँदैन । सापेक्षित रूपले निरन्तर कार्यान्वय हुँदै जाने हो ।
र, संविधान संशोधनको परिस्थिति अहिले छैन । संविधानमा जतिखेर दलहरुका बीचमा सहमति हुन्छ, त्यो बेला संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । संविधानको दस्ताबेज समाजसापेक्ष दस्ताबेज भएको हुँदा समय समयमा संशोधन, परिमार्जन भइरहन्छ । यो वैधानिक प्रक्रिया पनि हो । मुलुकको राष्ट्रिय परिस्थिति, राजनीतिक दलहरुको बीचको सहमति कति हुने नुहुने भन्ने आधारमा संशोधन हुने हो । निरपेक्ष रूपले संशोधन हुने, निरपेक्ष रूपले संशोधन नहुने भन्ने नै हुँदैन ।
संविधान दिवस मनाउन उर्दी गर्ने हो ? : भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
चार वर्ष बित्दाखेरी संविधान दिवस मनाउनका लागि सरकारले उर्दी नै जारी गर्नुपर्यो । तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, यो संविधानका बारेमा कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर ।
हामी के पढ्छौँ भने संविधान भनेको नागरिकको, देशको आस्थाको दस्तावेज हो । जहाँ जनताको आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित हुन्छ । यसलाई राज्यको घोषणपत्र भन्छन् ।
पहिलो त यो संविधान निर्माण गर्दै केही प्रक्रियाहरुमा त्रुटिहरु भए । संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा यसमा दुईवटा तत्वहरु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यसमा जनताको सहभागिता कस्तो रह्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । दोस्रो चाहिँ संविधान जारी भइसकेपछि कस्ता कुराहरु संविधानको अन्तरवस्तुमा आए भन्ने कुरा हेरिन्छ । हो दुई दुईवटा संविधानसभाले ८ वर्षसम्म काम गर्यो । संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिला संविधानसभाले औपचारिक रूपमा जनताले कस्तो संविधान बनाउन चाहन्छन्, संविधानमा के राख्न चाहन्छन् भन्ने विषयमा मत लिएको थियो । त्यो बेला जनताले तीन चारवटा कुरामा स्पष्ट ढङ्गले आफ्नो अभिमत प्रदान गरेका थिए ।
त्यसमा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुुनुपर्यो, धर्म निरपेक्षता हैन धर्म सापेक्षताको संविधान चाहिन्छ भन्ने कुरा थियो । यो औपचारिक मत हो जुन तपाईंले संविधानसभाको रेकर्डमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ । २ लाखभन्दा बढी औपचारिक मत लिएकोमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मान्छेले यो मत दिएका थिए ।
तेस्रो चाहिँ देशको अखण्डतको पक्षमा मत आएको थियो । चौथो चाहिँ राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरुको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको कुरा आएको थियो । तर जनताका यी कुनै पनि अभिमतलाई त्यो बेलाको संविधानसभाले संविधानमा राख्न चाहेन । यो निकै ठूलो कुरा हो ।
संविधान प्रहरी शक्तिको भरमा हुँदैन यसमा कानुनी शक्ति चाहिन्छ । संविधान लामो समयसम्म टिक्ने भनेको यसमाथिको नैतिक जिम्मेवारीले हो । त्यो नैतिक अख्तियारी शासकको इमानदारिता र कार्यान्वयनमा आउँछ ।
अर्को कुरा असोज २ गते साँझ ५ बजे हामीले संविधान जारी गर्यौँ, त्यो बेला त्यसलाई केही समय स्थगित गरेर हाम्रो पनि माग समावेश गरियोस् भन्ने मधेसी पक्षको माग थियो । त्यसलाई हामीले सम्बोधन गरेनौँ । सम्बोधन मात्रै गरेनौँ, त्यस दिन तराईमा ठूलो मात्रामा ब्ल्याक आउट गरिएको थियो । आन्दोलनमा तराईमा केही मान्छे पनि मरे । संविधान जारी भएको उपलक्ष्यमा साँझ हामीले दीपावली गर्यौँ ।
यसले के गर्यो भने संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट एउटा ठूलो समुदाय अलग भयो । यो आफैमा पनि संविधान कार्यान्वयनको चुनौती हो ।
संविधानले धेरै अधिकार दिलायो : कृष्णप्रसाद सिटौला, नेता नेपाली काँग्रेस
संविधानमा कही कमजोरी छन् । तर पनि यो संविधान लोकतान्त्रिक र गतिशील छ । २०६२/२०६३ जनआन्दोलनले ल्याएको गणतन्त्र मात्रै ल्याएन जनतामा धेरै अधिकार पनि दिलायो । सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशिता निर्वाचन प्रणाली, मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी संविधानमा छन् ।
तर पनि हामी सबैबाट गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने बेला भएको छ, ‘गल्ती कहाँबाट भएको छ भन्ने कुरा ।’ संविधानले जसरी संवैधानिक अङ्गहरुको व्यवस्था गरेको छ । ती संस्थाहरुले अहिले प्रभावकारी ढङ्गले काम नगर्दा समस्या भएको हो । हामीलाई सबै संवैधानिक निकायहरुमा सरकारको छाया पर्न थालेको त छैन भन्ने लाग्न थालेको छ ।
अहिलेको संविधानलाई कुनै राजाबाट आएको संविधानसँग तुलना गर्न मिल्दैन । जनताको लामो समयको क्रान्ति र बलिदानबाटै यो संविधान आएको हो । नेपाल स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्र हो । यो देशले आफ्नो पहिचान दिएको छ । राजनीतिक पहिचान दिएको छ । त्यसैले धेरै कुरा विचार गरेर मात्रै संविधानमा टिप्पणी गर्नु ठीक हुन्छ ।
संविधानसँग असन्तुष्ट रहनेहरुले भन्न सक्नुपर्छ कि छलफलका एजेन्डा यी हुन सक्छन् भनेर । काँग्रेस छलफलका लागि खुल्ला छ । संविधानको अन्तरवस्तुमा छलफल गर्न संसदमार्फत यो संविधानलाई विकसित गर्न, परिमार्जन गरेर यसलाई जनताको पक्षमा अझ बलशाली, शक्तिशाली बनाउन हामी तयार छौँ ।
Sept. 20, 2019, 5:31 p.m. Ram shankar Yadav
Bastab ma sambidhan sarb siwkarya chhain. Yatro madheshi janta marda. Aafano Birodh janai rahda pani. Desh ka thula dal le sambidhan Biswa kai sarb utkrisht sambidhan ho bhane bhane chh.Bastab ma banayo pani usle nai. Mulyakan pani usaile nai garyo. Madhesi janta ko lagi Bastab ma #Black Day Nai Ho Ashoj 3.madheshi janta pachhi parnu ko auta karan parmukh Yaha netryut garne madheshi Dal Haru kai karan nai Ho. Uniharu le bich bich ma aaye ra janta lai murkh bana ko ho aru kehi hoin. Last #Madheshi Sahido Ko Sata sata Naman. Jay Madhesh
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भाका सरेको सर्‍यै, आउला त एक वर्षमा पानी ?